IViduPM: Ulawulo lweProjekthi ye-SEO kwi-Intanethi, ukuNgxelo, kunye nePlatifomu yokuHlawula | Martech Zone
IViduPM: Ulawulo lweProjekthi ye-SEO kwi-Intanethi, ukuNgxelo, kunye neQonga lokuPhepha
NgoLwesihlanu, Agasti 3, 2018 NgoMgqibelo, Agasti 4, 2018 Douglas Karr
Ngelixa iiarhente ezininzi zentengiso yedijithali zigxile ekusebenziseni injini yokukhangela kwaye zikhona izixhobo ezingenakubalwa kwintengiso ye-SEO, bahlala bejolise ekuhanjisweni kwe-SEO ngobuchule hayi olona lawulo lwabathengi. IViduPM yakhelwe ngokukodwa iiarhente ezijolise kwi-SEO ukulawula, ukusebenzisana, ukunika ingxelo, kunye nokwenza i-invoice abathengi bakho be-SEO.
Iimpawu ze-ViduPM zibandakanya:
Ulawulo lweProjekthi ye-SEO -Ulawulo lweProjekthi luhlala luyinto ebalulekileyo kuLawulo lweQela elisebenzayo.
Ulawulo lwe-SEO -I-ViduPM ilungiselela ukuhlangabezana neemfuno zee-arhente zedijithali zokunxibelelanisa abathengi.
Ulawulo lwe-invoyisi -I-ViduPM inezixhobo zokulandela umkhondo kunye nokulawula ukuhlawulwa okusekwe kwiwebhu kunye nokubonelela ngolwalamano olungcono.
Ingxelo eyodwa -Iingxelo zokucwangciswa kweinjini yokukhangela ezizenzekelayo.
Management Time -Ukulandelela ixesha olichitha kunye neqela lakho kuyo yonke iprojekthi kunye neViduPM yokulandela ixesha.
Ulawulo lweFayile -I-ViduPM ikunceda ugcine zonke iifayile zakho zilungelelanisiwe kwaye zihlala zihlaziyiwe.
Communications -Hlala kwiphepha elinye nezixhobo zonxibelelwano zeqela ezilula.
Umdibaniso weSithathu -I-ViduPM inezinto ezininzi ekunokubonelelwa ngazo ngokudityaniswa kweQela lesi-3 ngokunjalo.
Jonga uluhlu olupheleleyo lwe onke amanqaku akwisiza seViduPM.
tags: arhente yentengiso yedijithaliUlawulo lweprojekthi yedijithaliinvoiceukungena kwi-invovoUhlobo lwegama elingundoqoulawulo lweprokjekthiisikhundlaSEOseo arhenteiqongaUlawulo lweprojekthiIsixhobo seoivupm
Iindlela ezintlanu zeSurefire zokuphucula ukuGuqula amajelo eendaba
I-10 ye-Pinterest Statistics Yonke iMarketer kufuneka uyazi